आँचल अहिले पनि भन्छिन्, ‘मेरो रियल हिरो पल नै हो’, महानायक कस्लाई मान्छिन् ? (भिडियो हेर्नुस्) - Onlinenews Global
June 20, 2021 laxmiLeaveaComment on आँचल अहिले पनि भन्छिन्, ‘मेरो रियल हिरो पल नै हो’, महानायक कस्लाई मान्छिन् ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । नायीका आँचल शर्माको वास्तविक दवाडी हो । तर पनि उनी शर्मा थरवाट चर्चित छन् । उनले एक वर्ष अघि डा उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेकी छन् । उनको विवाहको समयमा निकै चर्चा भयो । उनले लगाएको लुगा र गहनाको चर्चा भयो भने हेलिकप्टर लिएर रिसेप्सनमा आएको कुराले पनि निकै चर्चा पायो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
आफुहरुको सम्बन्ध फरक भएका कारण दुई जनाको फरक फरक ब्यक्तिसंग विवाह भए पनि आँप नाम र जोडी भने संधै रहने उनले बताएकी छन् । धेरै फिल्ममा पलसंग खेलेका कारण दर्शकले मन पराएर बनाइदिनु भएको आँप जोडी संधै रहन्छ, उनले भनिन् यो नामले इतिहास बनाउन सक्छ । तर प्रष्ट हुनुस् हाम्रो प्रेम भने होइन । पलसंगै नाई नभन्नु ल ४ वाट फिल्म खेल्न सुरु गरेकी आँचलले डा उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेकी छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
झाँक्रीलाई व्यंग्य गर्दै थापाले भने – मन्त्री चाहिएर होला पाखुरा समाउँदै हिडेको